Sunday, 20 Nov, 2016 12:34 PM
संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपनि त्यसलाई शतप्रतिशतले चित्त अझै बुझाउन सकेका छैनन् । नेपालको संविधानमा बिशेषगरी मधेसी दलहरुको रुष्टता अझै कायमै छ यद्यपि संसोधनबाट उनीहरुलाई पनि सहमतिमा ल्याउने प्रयासमा सरकारले छलफल चलाइरहेको छ । अहिले सबैभन्दा विवादित विषय बनेको छ स्थानीय तह पूर्नसँरचना । भइरहेको जिल्ला टुक्र्याए स्थानीयवासी विरोधमा उत्रने तर पुर्नसँरचना हुदा सबै जिल्लाहरु पूर्ववत अवस्थामै रहन नसक्ने अवस्था पनि छ यसकारण पनि यो विषय निकै विवादित बनेको छ । क्षेत्र नंम्बर दुईका नेपाली कांग्रेसका सभासद तथा पुर्व सिचाइमन्त्री एनपी साउद सँग स्थानीय पूर्नसंरचनाको विषय, संविधान संसोधन ,स्थानीय निकायको चुनाव लगायतको विषयमा न्यूजसेवाकर्मी पिएन ओझाले गरेको कुराकानीको अंश :
स्थानिय तह पुर्नसंरचनाका विषयमा अझै विवाद कायमै छ, विवादीत जिल्लाको समाधान कसरी होला ?
स्थानिय पुर्नसंरचनाका विषयमा अधिकांश जिल्लामा काम भइसकेको छ । तपाईले भन्नु भएजस्तै केहि सिमित जिल्लामा काम हुन सकैको छैन । विशेष गरेर एक र दुई नम्बर प्रदेशका तराईका जिल्लामा यस्तो विवाद देखिएको हो । यसलाई सहमती र सहकार्यबाट चाँडो टुङ्ग्याएर आयोगले पुर्णता दिनुपर्छ । यसको समाधानका लागि सबै राजनितीक पार्टीहरुले आफ्ना मातहतका प्रतिनिधिहरुलाई छलफलका लागि निर्देशन दिनुपर्दछ ।
स्थानियतह पुर्नसंरचना गर्दा ठुला राजनितिक दलले आफ्नो पहुँच र स्वार्थको आधारमा पुर्नसंरचनाको प्रस्ताव गर्यो यसकारण पनि विवाद चुलियो भन्छन् नी ?
प्रस्ताव गर्दा राजनितिक दलले आ–आफ्नो कोणबाट हेरेका हुन सक्दछन् । तर, यो मुलतः राजनितिक सहमतीमा नै हुने कुरा हो । पुर्नसंरचना गर्दा जिल्ला विकास समीती अन्र्तगत प्राविधिक समिती पनि रहेकोले त्यसको प्राविधिक पक्षलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । त्यसकारण मलाई लाग्छ यसको अन्तिम निक्र्यौल हुने भएकोले राजनितकि आधारमाभन्दा पनि वस्तुगत आधारमा नै सहमती भएर पुर्नसंरचनाको प्रस्ताव गरिएको छ ।
संविधान संसोधनमा तपाइहरु (नेपाली कांग्रेस) कसरी प्रस्तुत भइरहनु भएको छ ?
संविधान संसोधन गर्नुपर्छ भनेर नेपाली कांग्रेसले पटक–पटक भन्दै आएको छ । मधेस केन्द्रित दलहरुले भनेजस्तै १० दिन वा १५ दिन तथा कुनै धाकधम्कीमा गर्नु भन्दा पनि सबैलाई सेमट्नका लागि गरिने राष्ट्रिय विषय हो । त्यसकारण यस विषयमा हामी वहस र छलफल गरिरहेका छौँ । यस विषयलाई सहमतीकै आधारमा चाँडोभन्दा चाँडो निर्णयमा पुर्याउने कोशिसमा छ हाम्रो पार्टी ।
आगामी निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड लगाउने भन्ने प्रावधानको पनि प्रस्ताव छ,साना दललाई मिलाउन कत्तिको चुनौति छ ?
वास्तवमा निर्वाचनका सन्दर्भमा थ्रेसहोल्ड राष्ट्रिय आवश्यकता भइसकेको छ । साना–साना झुण्डले वा कुनै व्यक्तिले संसदमा अस्वस्थ भूमिका निर्वाह गर्ने गरेका कारण राष्ट्रिय राजनिती र मुलुकको स्थायित्व प्रभावित हुदै आएको छ । त्यसकारण निश्चित प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । हामीलाई पुरा विश्वास छ की प्रतिशतको केहि तलमाथि भएपनि थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्नेमा राष्ट्रिय सहमती अनुसार हामी अगाडी बढ्नेछौँ । यसमा केहि चुनौतीहरु रहेका छन् । तर यसले राष्ट्रिय स्थायित्व दिन्छ र साना साना दलहरुको ठाउँमा मुल राजनितीक दलहरुतीर जनताको ध्यानआकर्षण पनि गराउँछ । त्यसकारण यसमा आएका चुनौतीहरुलाई छलफलको माध्यमबाटै समाधान गरिनेछन् ।
हिन्दुराष्ट्र कायम गर्न भनि दुई राप्रपाविच एकिकरणको तयारी भर्इरहेको छ , हिन्दु राष्ट्र कायम हुने सम्भावना चाहि कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
हिन्दु राष्ट्र कायम गर्नका मात्रै लागि कुनै राजनितीक दलहरुमा एकीकरण भएको हो भन्ने कुरा त मान्न सकिदैन । किनभने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विगतमा पनि एकै ठाउँमा थिए । उनीहरुका आफ्नै किसिमका एजेण्डाहरु, दर्शनहरु रहेका छन् । उनीहरुका पक्षमा त्यस्तै किसिमको केहि जनमत पनि रहेको छ । त्यसलाई विभाजन हुन नदिनका लागि उनीहरु एकमत भइरहेका छन् भन्ने मलाई लाग्दछ । उनीहरुको एकताका कारणले हिन्दु राष्ट्र आउने र विभाजित भएका कारण रोकिने भन्ने कुरा असम्भव छ ।
अख्तियार प्रमुखलाइ महाअभियोग लगाउने विषयमा नेपाली काँग्रेसको धारण के छ ?
अब अख्तियार प्रमुख कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने विषयमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । यस विषयमा संसदमा छलफल चलीरहेको छ । महाअभियोगको लागि एउटा सिफारिस समिती पनि बनेको छ । त्यस समीतीले महाअभियोगका लागि आधारहरु उपयुक्त छन्, की छैनन् भन्ने बारेमा वैधानिक अधिकार राख्दछ । यि सबै प्रक्रिया भइसकेपछी नेपाली कांग्रसले आफ्नो धारण सार्वजनिक गर्नेछ ।
संसदमा एक महिनामा जम्मा चारदिन मात्र छलफछ भएको छ ,संसद सुस्ताएको हो ?
संसद सुस्ताएको भन्ने विषयमा जुन तपाँईको प्रश्न छ, त्यसो चाँही होइन । यस बीचमा चाडपर्वहरु पनि परे र त्यो मात्रै विषय नभएर अन्य पन थुप्रै विषयमा पनि छलफल चलीरहेकोले केहि ढिलो भएको हुनसक्दछ । तर, संसदमा बहस चलीरहेको छ र कुनै वृत्तले ज्यादा दबाब दियो भन्ने आधारमा मात्रै हैन की, निष्पक्षतापूर्वक मुद्दाको छानबिन गर्नुपर्ने भएकोले समय लाग्नु स्वाभाविक हो । यसलाई अन्यथा लीनु हुँदैन ।
स्थानिय निकायको चुनाव चैतमाहुने सम्भावना त निकै न्यून देखिएको छ यदि भएन भने देश कुन दिशातर्फ मोडिन्छ ?
हामीले दु्रतगतीमा काम गर्यौ भने चैतम चुनाव सम्भव छ, हुन्छ भन्नेमा पूर्ण विश्वस्त छौँ । यदि चैतमा चुनाव हुन सकेन भने यो दुर्भाग्य हुन्छ । लामो समयदेखी स्थानिय निकायहरु खाली छन् । यदि कदमकदाचित सकिएन राष्ट्रिय राजनितीनै अस्तव्यस्त हुन्छ र वर्तमान सरकार गठबन्धनको औचित्य समाप्त हुन्छ ।